ထီဖှငျ့ပှဲအား ရကျအကနျ့အသတျမရှိ ရှဆေို့ငျးပေးရနျ ထီလုပျငနျးရှငျအသငျးက တောငျးဆို - VPS - Shweman Online Media
ထီဖှငျ့ပှဲအား ရကျအကနျ့အသတျမရှိ ရှဆေို့ငျးပေးရနျ ထီလုပျငနျးရှငျအသငျးက တောငျးဆို
admin | April 25, 2020 | Local News, News | No Comments
COVID- 19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့် နေရာတော်တော်များများတွင် Lockdown ချထားခြင်း၊ ပြည်သူများနေအိမ်ပြင်ပ မထွက်ပဲ Stay Home နေထိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ထီအရောင်းအဝယ်ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါးရှိနေသဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီးမှသာ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဦးသီဟဝင်းမော်က ပြောသည်။
“ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကရော၊ အရင်းအနှီးရှုထောင့်အရကပါ တောင်းဆိုတာပါ။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကလည်း မြင့်တက်လာတယ်။ အပြင်မှာလဲလူစုလူဝေး မရှိတော့ဘူး။ လဆန်းပိုင်းကတည်းက အောင်ဘာလေရုံးက ထီလတ်မှတ်တွေထုတ်ယူထားတာက ပြန်ရောင်းချဖို့ကအခက်အခဲဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့် လစဉ်မပျက်ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ဖို့ အခြေအနေတည်ငြိမ်တဲ့အထိရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါ” ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲတွင်လည်း အလွှာပေါင်းစုံမှ ထီရောင်းချသူ ပြည်သူများ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းအထက် အရင်း ပျောက်ခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ယခုလထွက်ရှိမည့် ၁၅ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ဖွင့်ပွဲကို (၁)ရက်နေ့အစား ၁၅ရက်နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်မည်ဟု သက်ဆိုင်ရာက မီဒီယာများသို့ပြောကြားထားသော်လည်း ထီလက်မှတ်တွင် “မေ ၁ ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည်” ဟုဖော်ပြထားသဖြင့် ထီဖွင့်ရက်အတိအကျပြောရန် ခက်ခဲနေသည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် COVID-19 ရောဂါ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုဖြစ်ပွားလာနေပြီး အဝေးပြေးကားဂိတ်များ ရပ်နားခဲ့ကြခြင်း၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးဆိုင်မှလွဲ၍ မဖွင့်ရခြင်း၊ နေရာအနှံ့ Lockdown များ ပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် အခြားအခက်အခဲများကြောင့် ထီရောင်းချ၍ မရတော့ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်။
ပန်ချီကားရေးဆွဲရာ၌ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာ များကြောင့် သရုပ်ဆောင်ချစ်သူ့ဝေနှင့်သူ၏ ဖခင်ကို တရားစွဲဆို
လာ မည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် အောက် ပါထီလက်မှတ်များ မထိုးမိေ စရန် ” ထီ “လက် မှတ် သတိပေးချက်…
မွနျမာနိုငျငံအတှကျ. .အရေးတကွီး လိုအပျနတေဲ့ ကိုဗဈစဈဆေးတဲ့ စကျမနကျဖနျမနကျ ဘနျကောကျမှ တဆငျ့.ပေ ၄၀ ကှနျတိနျနာ ၃ လုံး .
ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အလှူအတန်းပြုခဲ့တဲ့ မိသားစု
မိမိကိုယ်ကို ၁၅ ရက်အတွင်း ပြောင်းလဲသွားအောင် ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ကြည့်ပါ
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးထဲက အမြတ်ငွေတွေကို ဘုရားတည်ဖို့ စုနေတယ်ဆိုတဲ့ မေကဗျာ
သေမင်းပါးစပ်ပေါက်ဝကနေ သီသီလေး လွတ်မြောက်လာတဲ့ ရေမဆေးသမား တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက် ( ရုပ်/သံ )
ဖုန်း မှန် ကွဲနေတာ ဆက်သုံး ရင် ဖြစ် လာ မယ့် ဆိုးကျိုးတွေ
မြိတ် တွင် ၁၆ နှစ်အရွယ် အ မျိုးသမီးတစ်ဦး ထပ်မံပျောက်ဆုံး တစ် လအတွင်း လူ၎ ဦးပျောက်နေ